Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Ben Chilwell Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa ngegama lesidlaliso "Chilly". Indaba yethu ye-Ben Chilwell Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nesimo sakhe esilula esiqhingini saseNgilandi. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-biography kaBen Chilwell eyithandekayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambilini Nomndeni
Ukuqala, igama lakhe eliphelele nguBenjamin James Chilwell. UBen Chilwell noma "Chilly"Njengoba ebizwa kuthiwa wazalwa ngosuku lwe-21st ngoDisemba 1996 eMilton Keynes, e-United Kingdom. Naphezu kokuzalwa eBrithani, ukukhulelwa kukaClwell akuzange kuhambe ngendlela evamile yaseBrithani. Ukukhulelwa kwakhe ekuqaleni kwamukela isiko laseNew Zealand. Lokhu kungenxa yokuthi umndeni wakwaChiwell uvela eNew Zealand.
Omunye umzali kaChilwell, uyise wakhe, weza eBrithani kanye noGogo wakhe (okufanekiselwa ngezansi) ekuqaleni kwe-1900.
Ngesikhathi eNgilandi, abazali bakaChilwell bobabili bajwayelana futhi ngaleyo ndlela baholela emshadweni wabo futhi kamuva bazalwa. U-Chilwell akazange akhule yodwa, kodwa kanye nomfowabo omkhulu obheka igama lakhe owaziwayo.
Ekuqaleni, uyise kaBen Chilwell wakha futhi wahlanganiswa nendodana yakhe, eyaziwa yiNew Zealand Kiwi ngengqondo eyayizuza njengezintambo ngesikhathi sakhe njengomdlali webhola. Ngaleso sikhathi, akekho owazi okuningi ngebhola ekhaya laseChilwell. WayenguBen Chilwell ngokwakhe owazisa abazali bakhe ibhola. Ngake wakhuluma;
Ngesikhathi nje ngiqala ukudlala ukuthi abazali bami babe nesithakazelo kulo mdlalo futhi manje bayayithanda.
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
U-Chilwell wokuqala we-football waqala ukusebenza engadini yakhe yaseMilton Keynes. Emuva ngaleso sikhathi, ensimini, wadala iphosta lapho edlala khona nobaba wakhe.
Wayevame ukungivumela ukuba ngizame futhi ngishaye i-crossbar ngesandla sami sokunxele nesinyawo sami esifanele ... kusho uBen. Ngemuva komkhuba wokwakha ekhaya, ubaba kaBen Chilwell wavuma ukubhalisa indodana yakhe neqembu leWilurn Lions laseMilton Keynes. EWoburn academy, kwafika abafana abancane lapho bebambe iqhaza lebhola. Ngakho kwakulula ukuthi uChiwell akwazi ukuhlanganisa nabalingani bakhe.
Ekhuluma ngesipiliyoni sakhe eWoburn Lions, uChilwell wakhumbula;
Ngisakhumbula umdlalo wami wokuqala. Kwakungamelene noWillen, okwakungenye iqembu elivela eMilton Keynes, futhi ngicabanga ukuthi siphelile lo mdlalo 15-0 noma i-16-0. Kwakukhona abambalwa bethu abavela kuleli qembu abadlala ndawonye kusukela lapho sineminyaka eyisithupha noma eyisikhombisa, abane bethu baba izazi, ezimbili eLeicester kanye nama-MK Amathani.
Kamuva, u-Chilwell wathuthela eBletchley Youth academy yezemidlalo ukuze athole ulwazi oluthe xaxa nethuba elinenkampani enkulu. Kuleli qembu, waqhubeka nokuhola iqembu lakhe ekuphumeleleni yonke imincintiswano yasendaweni eyaholela ekukhuleni kwakhe kokuqala. Futhi ngosizo lwabazali bakhe ikakhulukazi ubaba wakhe, u-Chilwell wakha waba umdlali omuhle. Uke wabheka ukuthi ubaba wakhe wamcindezela kanjani, ethi;
Ubaba wayehlala ephikisana nami lapho ngisemncane ngokusebenza kanzima nokuzikhandla, ngakho wangena kimi futhi ngimkhokhela okuningi. Konke kuyiqiniso.
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts- Ukuya Professional
Indlela yodwa yokuthola amathuba kwakuwukufaka izicelo zokuhlolwa ngamaqembu amakhulu. Lokhu kwakungukuthi indlela kaChilwell ekufuneni kwakhe ukuqala ukuya emsebenzini. Ekugcineni wazama ukuphumelela eRushden & Diamonds esanda kumiswa eyayiyi-24km ukusuka ekhaya.
U-Rushden noDayim wavula umlilo kuye, ngaleyo ndlela wenza ukuba kubonakale emehlweni abo abaqeqeshi bezemfundo beLeicester City abamemeza inkanyezi ethembisa ukuhlolwa. U-Chilwell wahamba no-87km emzini wakhe ukuze ahlolwe ngempumelelo noLeicester. Ekhuluma ngesipiliyoni sokudlulisa, esake esho;
Ekugcineni ngathola icala eLieicester City amasonto ayisithupha. Babefuna ukungithatha, kodwa uRushden & Diamonds babezama ukuthola imali eningi kimi, nakuba ngineminyaka engu-12 kuphela.
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts- Isivivinyo seLeicester
U-Chilwell waqala ukuphila eLieicester eneminyaka eyi-12. Ngeshwa, akakwazanga ukuhlala eqenjini eminyakeni emithathu ngemuva kokuthengwa kwakhe. Lapho eneminyaka engu-15, u-Chilwell wayeqiniseka ngokuphelele ukuthi uzokhipha ngenxa yokungasebenzi.
U-Chilwell wayengomunye wabadlali bebhola lezinsizwa ezine abanobudlelwane obukhuni, abazange bathuthukiswe eLeicester City U16. Waqhubeka edlala nethimba le-U15 ngenkathi lonke iqembu lakhe elidala lidlala kuma-U16. Ngandlela-thile, inhlanhla yagijima eceleni kwakhe njengoba engakhululwa naphezu kokwesaba.
Ukushiya ibhola yeCricket:
Ngiphinde nginomunye ukhetho okumele ngikwenze ngalesi sigaba, ngoba mhlawumbe ngangingcono ekhilikithi kunokuba ngisenqoleni ...
kusho uChilwell ngezinsuku zakhe ezibuhlungu noLeicester. Ngonyaka ngaphambi kokubhekana nezinkinga zakhe, u-Chilwell usanda kungena esikoleni seCricket sikaNorthants waze waze waya eLoughborough ngecala lokuhlolwa kwe-ECB England U15s. Nokho, kwafika isikhathi lapho kufanele akhethe phakathi kwebhola nekhilikithi. Ekhuluma ngesinqumo sakhe, u-Chilwell ushilo;
Angizange ngijabulele ngempela ikhilikithi. Bayizinsuku ezinde futhi kaningi nabantu abangengabangane bami ngempela. Akuyona nje into efana nebhola futhi ngaleso sikhathi, ngenkathi ngingazange ngijabule ebhola, ngisanda kunquma ukunikeza ibhola ithuba lokugcina.
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Uphinde, ubaba wakhe wangena, wamtshela ukuthi aqhubeke nje, ukuthi ithalente lakhe lemvelo elalisemuva lalizoyiqhubezela. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba uChiwell ahlasele emuva futhi wajoyina abalingani bakhe abathintekayo. Lokhu kwalandelwa yi-win of the Academy Player of the Year umklomelo ekupheleni kwesikhathi se-2014-15.
Isizini se-2015 / 2016 saba yinto yokushintsha eqenjini lakhe nasemisebenzini kazwelonke. Ngaleso sikhathi, u-Chilwell wathola ukukhuthazwa eqenjini eliphezulu leLeicester futhi wabiza neNgilandi u-U18.
Ngenkathi efanayo (2015 / 2016) futhi kwenzeka njengonyaka ngonyaka weqembu leLeicester City elawula iNgilandi ngokuwina i-trophy trophy. Naphezu kokudubula komqeqeshi we-Premier League, abalandeli bathande kakhulu ukubukeka kukaDemarai Grey ngakwesokudla kwesithombe.
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ngomunye umuntu ophumelelayo ungowesifazane, ngemuva kwakhe ngumkakhe. Endabeni yeChilwell ephumelelayo, kukhona intombi enhle ehamba ngegama; Joanna Chimonides.
Bobabili abathandi bebelokhu bebonke kusukela ngoJulayi 2017, unyaka ngaphambi kokuba iNgilandi ikhunjulwe.
Ngenxa yemizuzu ye-5 ibanga eliphakathi kweKing Stadium Power kanye neYunivesithi yaseLeicester, kwakungelula ukuthi u-Chilwell ambone uJohanna ngosuku futhi amhlole ngokuphindaphindiwe.
UJoanna uchazwa njengomuntu obuhle nobuchopho ohamba ngesandla. Njengesikhathi sokubhala, ufundela i-Psychology evela eNyuvesi yaseLeicester. UJoanna waphinde wagubha nabalingani bakhe (ephakathi nendawo engakwesokunxele) ekufundiseni kwakhe;
Siyenzile 👩🏻🎓👩🏼🎓👩🏻🎓 sijabule kakhulu ukuthi sihlangabezane nalezi zinhle ezimbili ngosuku lwethu lokuqala ku-Uni, futhi manje sesiqedile nabo iminyaka engu-3 kamuva @emilygracedyer@christiegoodchild 💘💘💘
Ben Chilwell Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukwazi impilo kaBen Chilwell ngaphandle komkhakha wokudlala kuzokusiza ukwakha isithombe esingcono ngaye. Ngaphandle kwe-pitch, i-Chilwell i-extrovert, i-idealistic, inomqondo omkhulu wokuhlekisa futhi inesifiso esijulile.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Ben Chilwell Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.